မိန်းခလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) အချစ်...! - Thadin
HomeRELATIONSHIPမိန်းခလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) အချစ်…!
မိန်းခလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) အချစ်…!
February 15, 2019 Kay Kay RELATIONSHIP Comments Off on မိန်းခလေးတိုင်း အချစ်ခံချင်ကြတဲ့ (တဏှာမပါသော) အချစ်…!
သူငါ့ကို ဘာလို့ ချစ်တာလဲလို့ တစ်ခါတစ်လေမှာ စဉ်းစားဖူးပါလိမ့်မယ် ။ ဘာကြောင့်ချစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း မကြာခဏ မေးလေ့ရှိကြပါလိမ့်မယ် ။ ရုပ်ချောလို့ ချစ်တာလား ၊ ချစ်စရာကောင်းလို့ ချစ်တာလား ၊ ပိုက်ဆံရှိလို့ချစ်တာလား ၊ ဂုဏ်ရှိလို့ချစ်တာလား ၊ ကိုယ်လုံးလှလို့ ၊မိုက်လို့ချစ်တာလား ၊ စကားပြောကောင်းလုိ့ချစ်တာလား ၊ အနေအေးလို့ချစ်တာလား ၊ ယဉ်ကျေးလို့ချစ်တာလား စသဖြင့်ပေါ့ ။
ဒီနေရာမှာ တဏှာနဲ့ချစ်တာလား ၊ အချစ်နဲ့ချစ်တာလားဆိုတာကို ပြောချင်ပါတယ်။ တဏှာဆိုတာ Sခx ကိစ္စတစ်ခုတည်းကို မဆိုလိုပါဘူး ။ တဏှာဆိုတာကို တပ်မက်ခြင်းလို့ပဲ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပါရစေ ။ မိမိဆီက တစ်စုံတစ်ရာကို တပ်မက်ပြီး ချစ်တာဟာ တဏှာကိုဦးစားပေးပြီး ချစ်တာပါပဲ ။ အဲ့ဒိတပ်မက်တဲ့ အရာတစ်ခုခု မရှိတော့ရင် အဲ့အချစ်ကလည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါပြီ ။
သို့သော်လည်း တကယ့်အချစ်စစ်မှာတော့ ဘာလို့ချစ်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် တိကျတဲ့အဖြေမရှိပါဘူး ။ ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲက အမှန်တကယ်ချစ်နေလို့သာ သူနဲ့ပတ်သတ်သမျှက လှပနေတာပါ ။ အပြုအမူတိုင်းက သဘောကျစရာ ၊ချစ်စရာ ဖြစ်နေတာပါ ။ ယောကျာ်းလေးတော်တေ်ာများများ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျတတ်ကြပါတယ် ။
သို့သော် စိတ်နှလုံးပိုလှတဲ့သူကိုသာ ရွေးချယ်ကြတာပါ။ စိတ်လှတဲ့အလှက အပေါ်ယံရုပ်အလှကို ဖုံးသွားပါတယ် ။ ဒါကတော့ ကြားဖြတ်ပြောတာပါ ။ အပေါ်ယံအလှထက် စိတ်အလှက ပိုပေါ်လွင်ပြီး ပိုကြာရှည်ခံတာကို ပြောချင်တာပါ ။
ဘာကိုမှ မတပ်မက်ဘဲ အရိုးရှင်းဆုံး အချစ်နဲ့ ချစ်တဲ့အချစ်ကတော့ အချိန်အကြာကြီးအထိ ရှင်သန်နေမှာပါ ။ ဂုဏ်၊ငွေ ၊ လှပမှုတွေ မရှိတော့လည်း အချစ်က ပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ခံနိုင်ရည်အားကောင်းတဲ့ အချစ်မျိုးပါပဲ ။ဒီလိုအချစ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူဆိုရင်တော့ လုံးဝလက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး ။တဏှာမပါတဲ့ အချစ်ဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပြန်ပြောစရာ ရှိပါလိမ့်မယ် ။ ဟုတ်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ချစ်သူကို အစ်မလို ၊ ညီမလို ၊ အစ်ကိုလို ၊ မောင်လို ၊ သူငယ်ချင်းလိုတော့ ဘယ်သူမှ မချစ်ကြပါဘူး။ အနည်းငယ်တော့ ရှိကြတာပါပဲ ။ ကွာသွားတာက တဏှာကို အရင်းခံတာလား ၊ မေတ္တာကို အရင်းခံတာလား ဆိုတာပါပဲ …။
မိနျးခလေးတိုငျး အခဈြခံခငျြကွတဲ့ (တဏှာမပါသော) အခဈြ
သူငါ့ကို ဘာလို့ ခဈြတာလဲလို့ တဈခါတဈလမှော စဉျးစားဖူးပါလိမျ့မယျ ။ ဘာကွောငျ့ခဈြတယျ ဆိုတာကိုလညျး ကိုယျ့ခဈြသူကိုလညျး မကွာခဏ မေးလရှေိ့ကွပါလိမျ့မယျ ။ ရုပျခြောလို့ ခဈြတာလား ၊ ခဈြစရာကောငျးလို့ ခဈြတာလား ၊ ပိုကျဆံရှိလို့ခဈြတာလား ၊ ဂုဏျရှိလို့ခဈြတာလား ၊ ကိုယျလုံးလှလို့ ၊မိုကျလို့ခဈြတာလား ၊ စကားပွောကောငျးလုိ့ခဈြတာလား ၊ အနအေေးလို့ခဈြတာလား ၊ ယဉျကြေးလို့ခဈြတာလား စသဖွငျ့ပေါ့ ။
ဒီနရောမှာ တဏှာနဲ့ခဈြတာလား ၊ အခဈြနဲ့ခဈြတာလားဆိုတာကို ပွောခငျြပါတယျ။ တဏှာဆိုတာ Sခx ကိစ်စတဈခုတညျးကို မဆိုလိုပါဘူး ။ တဏှာဆိုတာကို တပျမကျခွငျးလို့ပဲ အဓိပ်ပါယျ ဖှငျ့ဆိုပါရစေ ။ မိမိဆီက တဈစုံတဈရာကို တပျမကျပွီး ခဈြတာဟာ တဏှာကိုဦးစားပေးပွီး ခဈြတာပါပဲ ။ အဲ့ဒိတပျမကျတဲ့ အရာတဈခုခု မရှိတော့ရငျ အဲ့အခဈြကလညျး ပြောကျကှယျသှားပါပွီ ။
သို့သျောလညျး တကယျ့အခဈြစဈမှာတော့ ဘာလို့ခဈြတာလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးအတှကျ တိကတြဲ့အဖွမေရှိပါဘူး ။ ကိုယျတိုငျစိတျထဲက အမှနျတကယျခဈြနလေို့သာ သူနဲ့ပတျသတျသမြှက လှပနတောပါ ။ အပွုအမူတိုငျးက သဘောကစြရာ ၊ခဈြစရာ ဖွဈနတောပါ ။ ယောကျြားလေးတျောတျောမြားမြား ခြောမောလှပတဲ့ မိနျးကလေးတှကေို သဘောကတြတျကွပါတယျ ။
သို့သျော စိတျနှလုံးပိုလှတဲ့သူကိုသာ ရှေးခယျြကွတာပါ။ စိတျလှတဲ့အလှက အပျေါယံရုပျအလှကို ဖုံးသှားပါတယျ ။ ဒါကတော့ ကွားဖွတျပွောတာပါ ။ အပျေါယံအလှထကျ စိတျအလှက ပိုပျေါလှငျပွီး ပိုကွာရှညျခံတာကို ပွောခငျြတာပါ ။
ဘာကိုမှ မတပျမကျဘဲ အရိုးရှငျးဆုံး အခဈြနဲ့ ခဈြတဲ့အခဈြကတော့ အခြိနျအကွာကွီးအထိ ရှငျသနျနမှောပါ ။ ဂုဏျ၊ငှေ ၊ လှပမှုတှေ မရှိတော့လညျး အခဈြက ပကျြစီးသှားမှာမဟုတျပါဘူး ။ ခံနိုငျရညျအားကောငျးတဲ့ အခဈြမြိုးပါပဲ ။ဒီလိုအခဈြမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရတဲ့သူဆိုရငျတော့ လုံးဝလကျလှတျမခံသငျ့ပါဘူး ။တဏှာမပါတဲ့ အခဈြဆိုတာ မရှိဘူးလို့ ပွနျပွောစရာ ရှိပါလိမျ့မယျ ။ ဟုတျပါတယျ ။
ကိုယျ့ခဈြသူကို အဈမလို ၊ ညီမလို ၊ အဈကိုလို ၊ မောငျလို ၊ သူငယျခငျြးလိုတော့ ဘယျသူမှ မခဈြကွပါဘူး။ အနညျးငယျတော့ ရှိကွတာပါပဲ ။ ကှာသှားတာက တဏှာကို အရငျးခံတာလား ၊ မတ်ေတာကို အရငျးခံတာလား ဆိုတာပါပဲ …။
ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင် လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ…!
အိမ်မပိုင်တဲ့ ချစ်သူကို အိပ်ခါနီး ဖုန်းခေါ်တဲ့ အခါ…!
This Month : 38511
This Year : 233909
Total Users : 592933
Total views : 2721033